Ekpere iji nweta ego akwụ ụgwọ. ? Iji kwụọ ụgwọ taa!
Kpee ekpere ka ị nweta ego ị kwụrụ Dị ka ngwa ọgụ ime mmụọ anyị nwere ike iji mgbe ọ bụla anyị chọrọ ya, ọ dị oke mkpa ebe ọ bụ na enyemaka ime mmụọ ka anyị wee nwee ezi mmekọrịta mgbe niile n'etiti ndị enyi na ezinụlọ dị mkpa, ọkachasị mgbe enwere nsogbu ego.
Endinggba ego na mmadụ choro inwe ntụkwasị obi na ọ bụ ya mere inwe mmụọ nke ime mmụọ ga - eji mee mkpebi ego anyị ọfụma dị oke mkpa iji hụ na azụmaahịa a ga - aga nke ọma yana ọbụbụenyi agaghị ata ahụhụ ọ bụla.
Ekpere nwere ike ibu ihe nzuzo a ma di ike nke uku ibupu ihe isi ike ma obu nsogbu ndi anyi chere na odi oke nkpa ịhapụ.
1 Ekpere ka akwu ugwo O bu gini?
2 1) Ekpere iweghachite ego nara
3 2) Ekpere ka igha ugwo
4 3) Ekpere di mma iji nakọta ego
4.1 Ndi ẹkpenen̄ede ẹbọn̄ akam emi?
Ekpere ka akwu ugwo O bu gini?
N'okwu a, ihe kpatara ya doro anya mana ọbụghị naanị maka nweta ego mana ka ewee wezuga nke a n’onweghi na odighi mkpa ịbanye n’onye ozo. A na-eji ya mgbe ụfọdụ ọnọdụ bịara bụrụ ihe nwute.
Ọ bụghị naanị na ọnọdụ mbinye ego mana mgbe anyị na-eche ụgwọ maka ọrụ anyị ma ọ bụ ihe ọzọ.
Paymentsgwọ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ka bụ ndị ejidere, anyị nwere ike ịhapụ ha ka anyị wepụta ekpere a dị ike.
1) Ekpere iweghachite ego nara
Senhor, meu pai, gị onye kachasị ike, nke mbụ, ana m ekele gị maka ngọzi ị na-enye m kwa ụbọchị, ndụ mmụọ, peel saúde, na-azụlite ntutu na ntutu dị mma;
Gwa m ihe ị na-eche na ọ bụ filho teu na obi umeala M Peço na ọnọdụ a na - enye m nsogbu, ị nyere m aka (ekwuru ma obu nome zuru oke na pessoa) kwụọ m ụgwọ ma ọ bụ dinheiro nke nwere okwukwe na azụmahịa na mmesapụ aka.
Ghọta oge niile na ịmara na ọ dị mkpa mgbe niile iji nyere Nossos irmãos em situções preárias, Achọrọ m ka ị belata coração e seu espírito ka ị jupụta ma kwụọ m dinheiro a nke ọ dị m mkpa iji nwee ndụ na nsọpụrụ dị nsọ. inwe ike ịga n'ihu na-enyere m aka semelhantes, assim mesmo inwe ike ịgbaso desígnios ha.
Ọ dị mkpa ikpee ekpere a ka ha jiri okwukwe kwụọ gị ego.
Ohere ịzụ ahịa na-adabakarị nso na ọnọdụ siri ike.
Anyị nọ na ọha mmadụ nke ịchọ ọdịmma onwe onye yiri ka ọ bụ injin nke ọtụtụ, ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-arịọ mgbazinye ego iji tinye ihe egwu na azụmaahịa nke anaghị aga nke ọma ma mechaa buru ụgwọ na nsogbu maka onwe ha
N'ime ọnọdụ ndị a ebe achọrọ ego iji zụta anyị, anyị nwere ike ịgakwuru ngwa agha a dị ike, nke anyị ga-ahụ azịza ya na obere oge karịa ka anyị chere.
2) Ekpere ka igha ugwo
Chineke Nke puru ime ihe nile na onye obi ebere onye mere ka okpukpere Gi di nso nke José Gregorio de la Rivera, onye onye okwukwe gburu site na etiti Golgotha ​​buru uzo nye ya ...
Ndi Vatican kwenyere na ọ bụ onye na-elekọta akụ nke ndị na - efe gị, onye na - elekọta ego ha, nke ọmarịcha na okwute ọma, ya na onyinye nke ime ka ha kwụọ anyị ụgwọ ha ji anyị. Mara omume ọma nke etinyegoro gi na mbu, abiakwute m ka m juo gi…
(Mee arịrịọ gị) Biko m, José Gregorio de la Rivera.
Nyere m aka ibute n’iru Onye-nwe ihe m na-arịọ n’ekpere a maka nsọpụrụ kacha ukwuu na otuto nke gị nakwa maka abamuru nke mkpụrụ obi m. Biko San José Gregorio iji mee ka a mara aha gị ma mee ka ndị na - eso ụzọ gị nwekwuo ihe ọ bụla.
Ihe niile ị na-emere m nke ọma, m na-ekwe nkwa imere ndị ọzọ. Aga m aga ụka asaa ma kpee abụ ọma nke i gosipụtara. Achọghị m onye ọ bụla nke ọjọọ, mana iweghachite ụgwọ m ji
Saint Mary, chebe anyi.
Ekpere a iji kwụọ m ụgwọ iji weghachite ego anyị gbapụtara, anyị ga-atọpụ ego a napụrụ anyị n'aka n'ọnọdụ ọ bụla.
Na mpaghara mbara igwe ndị dị mkpa na-alụ ọgụ na mpaghara ego bụ otu n'ime nsogbu kachasị nke mmadụ nwere ebe ọ bụ na ọ gụnyere mkpa anụ ahụ, mmekọrịta onwe onye yana ụfọdụ ọnọdụ enwere ike iwere dị ka ihe mgbagwoju anya.
3) Ekpere di mma iji nakọta ego
Pụrụ Ime Ihe Niile;
Taa a na m ekwuwapụta gị ekpere a n’eluigwe
Nyere m aka n’oge awa nke a dị
Enwetaghị m ihe m chọrọ;
Taa, na agbanyeghi omume ọma m,
Emegharịala m azụ ma enweghị m ike ịgbake
Ego ahụ ji m ụgwọ.
Maka nke a, nna nke elu-igwe, abịara m nyere gị aka
N'ihi na ị napụta m ụkọ a
Meekwa onye nke m nyeere aka
N’oge ahụ debe okwu gị
Dozie ụgwọ anyị kwetara n'oge gara aga.
Naanị ị ga - eme ka m pụta mmeri
Site na nke a zutere, ebe ọ bụ na itule nke Ikpe Ziri Ezi
Ọ dabere n'ebe m nọ.
A na m arịọ gị ka ị sonye na mkpụrụ obi, akọ na uche na omume
Nke isiokwu ahụ na nke ahụ, eriri gị kpaliri
Emefuru m ego m gbazite na-enweghị
Kama isi ọnwụ na ya.
Ahapụrụ m arịrịọ a dị ka uche gị si dị
Nye m ihe m rịọrọ.
Chargenakọta nchịkọta abụghị ihe dị mfe. Anyi aghaghi ima ihe ndi choro n’aka onye agbata obi anyị mgbe ị na-achọ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ oke ego nke etinyere na mbụ.
Ekpere a bara uru iji kpata ego, na mgbakwunye na inyere anyị aka ime ka usoro ahụ baa uru, ga-eme ka anyị nweta amamihe iji jiri okwu dị mma n'oge ịkwụ ụgwọ.
Na mgbakwunye na ihe a niile, cheta na okwu Chineke kpọrọ anyị ka anyị ghara ime ihe anyị na-achọghị ka emee anyị, ọ bụ ụkpụrụ a maara dị ka iwu ọla edo na anyị ga-eburu n’uche karịa ụdị a. Ekpere a na ekpere ọ bụla ọzọ anyị ga - eme ga - eme ka anyị bịarukwuo Onyenwe anyị nso, ọ ga - emekwa ka anyị nwee ọgụgụ isi na mmadụ mgbe anyị na - eme nchịkọta ọ bụla.
Ndi ẹkpenen̄ede ẹbọn̄ akam emi?
Ya mere una oración Ọ dị ike ihe ị ga - eme bụ ikwere site n’obi n’ihi na nke a bụ naanị ihe achọrọ na site na mmalite nke okike nke ụwa ka a rịọrịtara ka Ekpere di ike ma sie ike Ekebere elu ụwa site n'okwu ọnụ ya mere na anyị ga-emerịrị arịrịọ anyị site na mkpụrụ obi mana site na ọtụtụ ọrụ na ịmara ihe anyị na-arịọ, ha na-adaba na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, na-echekarị banyere ụmụ mmadụ ibe anyị karịa na anyị onwe anyị ma ọ bụ Uru onwe anyị.
Ọ bụrụ na anyị na-eme nke a n’ezie, ekpere anyị na-ekpe dị ike nke ukwuu n’enweghị mkpa ịwụnye kandụl ma ọ bụ kwadebe gburugburu ekpere pụrụ iche.
Jiri ike niile n’ekpe ekpere. Ha ga na-akwụ gị ụgwọ.